Switchbot waxay soosaaraysaa 2 shey oo cusub: Sensor Motion iyo Sensor Contact | Androidsis
Switchbot waxay soosaaraysaa 2 shey oo cusub: Motion Sensor iyo Sensor Contact
daniplay | | Noticias, Qalabka kale
Horumarka tikniyoolajiyaddu wuxuu horumar ballaadhan ka sameeyey nolol maalmeedkeenna, ugu yaraan sidii aannu horeba ugu ogayn. Qalabaynta guriga ayaa ka jirta guryo badan, Ka ciyaarida door aasaasi ah marka ay timaado isku xirnaanta, in laydh shido iyadoo la ogaanayo ama qalab laga helayo taleefanka.
beddelka, shirkad caan ah oo qalabka casriga ah, ayaa ku dhawaaqday SwitchBot Sotionor Sensor iyo SwitchBot Sensor Contact. Iyagu waa laba shey oo cusub oo isku dhafan oo ay weheliyaan aaladda otomatiga guriga, dareemayaasha dhaqdhaqaaqa ayaa faa'iido leh maalinteenna ilaa maanta oo waa hagaagsan yihiin haddii aad rabto inaad nolol siiso aaladahaas guriga laga heli karo.
1 SwitchBot Sotionor Sensor
2 SwitchBot Sensor Sensor
3 Wax walba ku habboon
SwitchBot Sotionor Sensor
Midka hore waa SwitchBot Motion Sensor, Dareemayaal dhaqdhaqaaq yar oo cabbirkiisu yahay 2,1 x 2,1 x 1,2 inji. Thanks to PIR (Passive Infrared) sensor sensor waxay ogaan kartaa jiritaanka qof kasta oo bini aadam ah, waxay sidoo kale ku daraysaa dareeraha iftiinka si loo cabiro inay tahay maalin ama habeen.
Dareemuhu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ogeysiisyo ugu diro taleefanka casriga ah ee la xiriira, markasta oo uu arko dhaqdhaqaaq, taas oo ka dhigaysa qalab ku habboon xaaladaha noocaas ah. Waxay ku habboonaan doontaa guriga, xafiiska iyo goobaha taas oo ay dadku maraan maalintii oo dhan.
SwitchBot Motion Sensor, oo lagu qaso alaabooyinka kale ee SwitchBot, wuxuu ballaarin doonaa shaqooyinkiisa, oo ay kujirto inuu awood u yeesho inuu shido nalka guriga iyadoo si dhib yar lagugu ogaado mugdiga. Marka laga reebo shidida nalalka, Motion Sensor iyo aalado kale sumadda, waxaad ku bilaabi kartaa duubista fiidiyowyada kuwa ku soo xadgudbay ee suurtogalka ah ama waxaad ku dhaqaajineysaa mid ka mid ah qalabka adigoo kaliya maraya Motion Sensor.
Baadhitaanka Motion Sensor ee SwitchBot wuxuu qiyaastii yahay 9 mitir oo leh xagal 115º ah oo jiifa oo 55 by u taagan. Qalabku wuxuu la jaan qaadayaa Amazon Aleza iyo Google Assistant, marka lagu daro la shaqaynta kaliya laba baytariyada AAA si ay u socdaan 3 sano, waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho baytariyada alkaline-ka madax-bannaanida weyn.
Qiimaha Sensor SwitchBot waa 20,91 euro waxaana laga heli karaa isku xirkaan.
SwitchBot Sensor Sensor
Sensor-ka Motion SwitchBot waxaa weheliya SwitchBot Contact Sensor, oo ah dareemayaal ku habboon in lagu rakibo albaabbada iyo daaqadaha labadaba. Ku habboon in la ogaado haddii albaab ama daaqad la furay wakhti kasta, iyada oo si fiican u dhammaystireysa dareemayaasha kale ee astaanta SwitchBot.
Thanks to SwitchBot Contact Sensor gadget waad damin kartaa laydhadhka markii aad ka baxdo guriga, laakiin sidoo kale si toos ah ayey u daartaa markaad soo gasho. Waa hagaagsan tahay haddii aad rabto inaad daarto ama damiso taas oo ku xidhan hadba inaad baxdo iyo haddii aad gashoba kaliya iyada oo horay loo sii wado bilowga.
Dareemuhu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, dareeraha xiriiriyaha wuxuu cabbiraa 2,8 x 1 x 0,9 inji, halka magnetka taga albaabka / daaqadda uu hoos ugu sii dhacayo 1,4 x 0,5 x 0,5 inji Maxaa intaa ka badan, La xiriir Sensor wuxuu kugula socodsiin karaa fariin haddii qof furo albaabka, daaqadda, khaanadda ama meel kasta oo lagu rakibo, laakiin u baahan Hub Mini.
Ogaanshaha wuxuu ku saabsan yahay 5 mitir, 90º jiif iyo 50º oo taagan, halka masaafada iyo qalabka magnetka uusan dhaafi karin 30mm hawlgal sax ah. SwitchBot Contact Sensor wuxuu la shaqeeyaa laba baytariyada AAA muddo qiyaastii ah 3 sano, isagoo la jaan qaadaya Kaaliyaha Google iyo Amazon Alexa.
Qalabka waxaa laga heli karaa gudaha xidhiidhkan ee 20,91 euro.
Wax walba ku habboon
Iyada oo leh saldhig magnet ah oo kala bixi kara, dareeraha dhaqdhaqaaqa SwitchBot Waa lagu rakibi karaa meel kasta oo guriga ah, sida wadiiqada, saqafka, derbiga, shelf, albaab, qaboojiyaha, ama sariirta hoosteeda. Faa'iidooyinka way badnaan karaan, gaar ahaan haddii aad rabto inaad xakameyso qodobbada kala duwan.
SwitchBot Motion Sensor iyo SwitchBot Contact Sensor waa aalad ku habboon in lagu isticmaalo guriga iyo shaqada labadaba, maadaama aysan u baahnayn rakibid adag. Labaduba way wada shaqeyn karaan, mid baaro dhaq-dhaqaaq kasta oo bini-aadam ah, halka Sensor-ka lala xiriiro uu ku habboon yahay albaabada, daaqadaha, khaanadaha iyo goobaha kale ee istiraatiijiga ah.
Waad ku mahadsantahay cabirkooda iyo miisaankooda hoose, Motion Sensor iyo Sensor Contact waa la rakibi karaa meel kasta oo ka mid ah guriga, iyo sidoo kale shirkadda. Waxay ku xirnaan karaan Amazon Alexa iyo Kaaliyaha Google, tan awgeed waa lagama maarmaan in la raaco dhowr talaabo si loo awoodo in la isticmaalo labada qalab. Motion Sensor wuu awoodaa halkan ka iibso iyo Sensor La xiriir xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Switchbot waxay soosaaraysaa 2 shey oo cusub: Motion Sensor iyo Sensor Contact
Top 10 Taleefoonada waxqabadka ah ee Juun 2021